Adeegyada Caafimaadka - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Adeegyada Caafimaadka
Barnaamijyada lagu taageerayo caafimaadka xubinta ee ka baxsan rugta caafimaadka.
Waxaan bixinaa adeegyo caafimaad oo kala duwan si aan u daryeesho dhammaantiin. Waxaan u fidinaa barnaamijyo bilaash ah xubnaha leh xaalado caafimaad oo adag si ay gacan uga geystaan ​​horumarinta qorshe daryeel oo iyaga u shaqeeya. Waxaan xubnaha ku xiraa ilaha bulshada si aan wax uga qabanno arrimaha kale ee maalin kasta saameeya caafimaadkooda.
Kooxda Adeegyada Caafimaadka waxay ka kooban yihiin shaqaale caafimaad iyo kuwo aan daryeel caafimaad lahayn oo ka hawlgala mid kasta oo ka mid ah aagagga soo socda, dhammaantoodna ujeeddadeedu tahay inay hubiyaan qorshe daryeel wanaagsan oo adiga kugu habboon.
Inaad yeelato qorshe aad ku maareyso xaaladahaaga ayaa caafimaadkaaga ku ilaalin doonta. Kooxda Adeegyada Caafimaadka waxaa ka mid ah maareeyayaasha daryeelka kuwaas oo kaa caawin doona inaad horumariso qorshe daryeel iyadoo baahidaada caafimaad iyo himilooyinkaaga gaarka ah maskaxda lagu hayo. Barnaamijyadani waxay taageeraan xiriirka ka dhexeeya adiga iyo bixiyeyaashaada waxayna raadraacaan sida wanaagsan ee qorshaha daryeelku u shaqeynayo iyadoo la adeegsanayo tilmaamaha ku saleysan bukaan eegida iyo caddeynta.
Waxbadan ka baro habka aan u maaraynayno caafimaadka
Maareynta kiiska waxaa loogu talagalay xubnaha qaba xaalado caafimaad oo isku murugsan ama daba dheeraaday, badiyaa kuwa hela daryeelka in ka badan hal xaalad caafimaad. Maamulaha kiis ayaa u heellan inuu kaa caawiyo inaad ilaaliso oo aad hagaajiso caafimaadkaaga. Barnaamijkan waxaa lagu bixiyaa lacag la'aan. Raadi haddii aad u-qalanto oo baro sida loo helo tixraac.
Waxbadan ka baro adeegyada maaraynta kiisaska
Barnaamijkeena Tababarka Caafimaadka wuxuu xubnaha baraa sida loo sameeyo xulashooyin caafimaad qaba nolol maalmeedkooda iyo maareynta xaaladooda daba dheeraatay. Barnaamijku wuxuu raadiyaa bukaanada qaba cudurka sonkorowga, wadnaha oo isku xirma, neefta, iyo / ama cudurka sambabaha ee joogtada ah (COPD) wuxuuna kaqeyb geliyaa si loo arko inay u baahan yihiin caawinaad dheeri ah
Halkan guji si aad u ogaato haddii aad xaq u leedahay Tababbarka Caafimaadka
Caafimaadku waa ka badan yahay oo keliya inaad dhakhtar u tagto. Waxay ku saabsan tahay helitaanka wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu noolaato nolol maalmeedkaaga. Hadafkeenu waa inaan hubino in xubnaheena baahiyahiisa aasaasiga ah la daboolay. Waxaan ku taageernaa iyaga oo ka raadinaya adeegyo iyo barnaamijyo kale beeshooda. Haddii aad u baahan tahay caawimaad raadinta shaqo, gaadiid, cunto ama helitaanka hoy muddo dheer ah, kooxdayada ayaa ku taageeri kara.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan ilaha ay bixiyaan Barnaamijyada Beesha
Qiimeynta Caafimaadka waa sahan kooban oo lagu eegayo caafimaadkaaga iyo qaab nololeedkaaga oo tilmaamaya baahiyaha caafimaad ee gaarka ah iyo meelaha laga hagaajinayo. Shaqaalaheena Maareynta Caafimaadka waxay u isticmaalaan natiijooyinka si ay u abuuraan qorshahaaga daryeelka oo ay kuugula jaan qaadaan adeegyada caafimaadka iyo caafimaadka.
Waxbadan ka baro Qiimeynta Caafimaadka
Caafimaad qabku waa qaab nololeed, maahan oo keliya natiijo. Baro waxa talaabooyinka aad qaadi karto maalin kasta si aad u ilaaliso caafimaadkaaga. Kooxdayada tababarayaasha caafimaadka waxay bixiyaan talooyin iyo tabaha kaa caawinaya inaad daryeelkaaga ugu badan guriga ku hesho. Baro wax badan oo ku saabsan mowduucyada caafimaadka xilliyeed iyo siyaabo kale oo aad caafimaad ku ahaato. Dhagsii xiriirka soo socda si aad wax uga ogaato Nolosha Caafimaad ee gobolka Washington.
Waxbadan ka baro nolosha caafimaadka leh
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Abriil 1, 2021